ပို့စ်တင်ချိန် - 5/26/2014 04:58:00 AM
1. ကျွန်တော် ဖျားနေတာ သုံးပတ်လောက်ရှိပါပြီဆရာ။ sex ဆက်ဆံပြီးတာ (၈) လလောက်အကြာမှာပေါ့ဆရာ။ hiv chronic fever က ဘယ်တော့လောက်ကြာမှ ဖြစ်တာပါလဲဆရာ။ ကျွန်တော်က hiv test ကလွဲလို့ CP, X rays, typhoid test တွေစစ် ပြီးပါပြီ။ ဘာရောဂါမှမတွေ့ရပါဘူးဆရာ။ (၈) လအကြာမှာ (၃) ပတ် ဖျားပါတယ်ဆရာ။ (37.5 celsisus) အောက်မှာပါဆရာ။ hiv fever က အဲဒီ temperature ထက် များပါသလားဆရာ။ ဆက်ဆံပြီး (၈) လလောက် အကြာမှာရော hiv chronic fever ဖြစ်ပါသလားဆရာ၊၊
2. ကျွန်တော့်ရဲ့ တံတောင်ဆစ်အတွင်းဘက်မှာ အနီစက်လေးတစ်ခု ပေါ်နေပါတယ်ဗျ။ နည်းနည်းကြာပြီ ထင်တယ်ဗျ။ အဲဒါက AIDS ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ပါတယ်။ တခြားလက္ခဏာတွေတော့ ဘာမှမဖြစ်ဖူးပါဘူး။
2. Cytomegalovirus (CMV) မျက်စိကိုထိခိုက်တဲ့ (ဗိုင်းရပ်စ်) ရောဂါဖြစ်တယ်။ မျက်စိကွယ်စေနိုင်တယ်။
3. Herpes simplex ရေယုံဟာ (ဗိုင်းရပ်စ်) ကနေဖြစ်စေတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာရော လိင်လမ်းမှာပါဖြစ်တယ်။
4. Malaria ငှက်ဖျား